သီးနှံအရည်အသွေး မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်၊ စိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်း မင်းဒင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Tuesday, December 11,2018
MFVP အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်းမင်းဒင်။ ဓာတ်ပုံ- စိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ပို့ကုန် များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိုးရကလည်း စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး ပို့ ကုန်များကို အမျိုးသားပို့ကုန် မဟာဗျူဟာတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပိုမို တင်ပို့နိုင်ရန်ဆိုလျှင် သီးနှံအရည်အသွေး ကောင်းရန်လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ သီးနှံအရည်အသွေး ကောင်းရန် ဆိုလျှင် မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်များ ရှိရန်လိုသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရှိရန်လိုအပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာလည်း လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သော တောင်သူများ ၀င်ငွေတိုးလျက် အကျိုးရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ တောင်သူများ ၀င်ငွေတိုး အကျိုးရှိရန် ဆိုလျှင် တောင်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့စိုက်ပျိုးမည့် သီးနှံဈေးကွက်၏ အလားအလာကို သိရန်လိုသည်။ ကျန်း မာရေးနှင့် ညီညွတ်သော၊ အထွက်နှုန်းတိုးစေသော စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ သိရှိရန်လိုသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချ သူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်းမင်းဒင် အား AMIA ရဲ့ သတင်းထောက် မစိုးချစ်ချစ်ပိုင်မှ သွား ရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားသည်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မေး။ ။ ဒီနှစ်မှာ နှစ်ရှည်သီးနှံ မဟုတ်တဲ့ ဘယ်လိုသီးနှံမျိုးတွေကို တောင်သူတွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုး သင့်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ခုလောလောဆယ် တောင်ပေါ်ဒေသ၊ သွားရေးလာရေး ခက်တဲ့ဒေသတွေဆိုရင် macadamia စိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်။ သူက သီးထပ်နည်းတယ်။ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ရှိတယ်။ တစ်တန်ကို သိန်း ၇၀ လောက် ပေါက်ဈေးရှိတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသမှာ စိုက်မယ်ဆိုရင် macadamia စိုက်ဖို့ သတင်းပေးချင် ပါတယ်။ နောက် ထောပတ်သီး စိုက်ပါ။ အောက်ပြည်မှာကျတော့ ငှက်ပျော၊ သူက အလားအလာ အများကြီးရှိတယ်။ စိုက်ပျိုးသင့်တယ်။ ဒါအကြမ်းဖျဉ်း ခြုံပြောတာ။ ဒေသအလိုက်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုချင်း ထပ်ပြောရမှာပေါ့။ macadamia က တရုတ်ကို သွားတယ်။ တရုတ်ပြည်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ခုဆိုရင် လက် မှတ်တွေ၊ ဘာတွေ သိပ်ပြီးတော့ မသတ်မှတ်သေးဘူး။ နောက်ပိုင်း AQSIQ တို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်လာ ရင်တော့ သူတို့က သတ်မှတ်မှာပေါ့။ ငှက်ပျောကတော့ ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ်ကို သွားပါတယ်။
မေး။ ။ တောင်သူတွေကို ဒါမျိုးသတင်းအချက်ကို ပေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခု (ဒါမှမဟုတ်)စနစ်တစ်ခု တည် ထောင်ပေးဖို့ ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ အသင်းအနေနဲ့ကတော့ တောင်သူကို ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ အမြဲတမ်း လုပ်ပေးနေပါတယ်။ စိုက်စီးပွားသင်တန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ အသင်းကနေပြီးတော့ ဈေးကွက်တွေရဖို့ ချိတ်ဆက် ပေးမယ်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်နေတယ်။ တောင်သူကလည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ အသင်းကြီးက အခုဆို အသင်းဝင် လေးသောင်းခွဲကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိ သစ်သီးဝလံ ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ အလားအလာကိုလည်း ဖြေကြားပေးပါဦး ရှင့်။
ဖြေ။ ။ သစ်သီးဝလံ ဈေးကွက်ကတော့ အားလုံးက စားသုံးမှုပုံစံ ပြောင်းလာတော့၊ အရင်တုန်းက ဆန် တို့၊ စပါးတို့လောက်ပဲ အဓိကထား စားတာ။ ခုကျတော့ သစ်သီးဝလံတွေကို စားသုံးမှုများလာတယ်။ အထူး သဖြင့် တရုတ်က ပိုစားသုံးလာတယ်။ ပုံစံပြောင်းလာတဲ့အတွက် သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ဈေးကွက် အကြီးကြီး ရှိလာတယ်။ တိုးပြီးလာဖို့ပဲ ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက အပူပိုင်းသီးနှံက အောက်ပိုင်းတွေပဲ အများဆုံး စိုက်လို့ရတယ်။ အပူပိုင်း သီးနှံကော၊ သမပိုင်း သီးနှံတွေကော မြန်မာပြည်မှာ စိုက်လို့ရတယ်။ သူတို့တိုင်းပြည် က အအေးပိုင်းဘက် ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့် အပူပိုင်းသီးနှံတွေကို သူတို့ဆီမှာ မထွက်ဘူး။ မထွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်၊ နောက် ယိုးဒယား၊ ဗီယက်နာမ်လို နိုင်ငံမျိုးတွေက သူတို့က ယူရတာပေါ့။ အဲတော့ တ ရုတ်ပြည်က လူဦးရေက တစ်နေ့တစ်ခြား များလာတယ်။ နည်းနည်းလဲ ပိုချမ်းသာလာတော့ သူတို့လိုအပ်ချက် က ရှိလာတယ်။ အဲတော့ ဈေးကွက်ကြီးကတော့ ရှိလာမှာပဲ။ အဲတော့ ကိုယ်ဘက်က အမယ်စုံကို အရည်အ သွေးကောင်းတဲ့ သစ်သီးတွေထွက်ဖို့ လိုတာပေါ့။
မေး။ ။ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်တွေ၊ သီးနှံတွေမှာ အဓိက အရည်အသွေးပိုင်းက ပြဿာနာ ဖြစ်နေတယ်။ အရည်အသွေးပိုင်းအတွက် အသင်းအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အခု Sustainable Agricuture Development And Food Quailty Initiative(SAFI) ပရော ဂျက်လုပ်ထားတယ်။ တောင်သူတွေအားလုံး စိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်ကောင်း(GAP) အလေ့အကျင့် တွေရ အောင်။ ဖရဲသီးတို့၊ ဘာတို့ကို GAP နည်းနဲ့စိုက်မယ်။ ပြီးရင် မှုဆယ်ကုန်စည်ဒိုင်မှာ GAP ကောင်တာ တစ်ခု ထားပေးမယ်။ အဲလောက်ထိ အလေ့အကျင့် လုပ်လာမယ်။ GAP စိုက်တယ်။ သူ့မှာ အခွင့်အရေး မရှိဘူး။ ဒီအ တိုင်း တန်းတူရောင်းနေရရင် တောင်သူက ဘယ်စိုက်ပျိုးမလဲ။ GAP စိုက်မယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်ချက်တွေအ တိုင်း သူကလုပ်ရတာ။ ရိုးရိုးစိုက်တာထက် သူက ပိုပြီးအာမခံချက် ပိုပေးရတယ်။ ကထိကထလဲ များတယ် လေ။ အဲလိုလုပ်ရတဲ့အတွက် သူကဈေးကောင်းရဖို့ လိုတယ်။ သူတို့ကိုဒါကြောင့် အခွင့်အရေးပေးဖို့ လိုတာပေါ့။ အဲအတွက်ကြောင့် ကုန်စည်ဒိုင်တွေကို ပြောထားတယ်။ GAP အရောင်းစင်တွေ လုပ်ပေးဖို့။ လမ်းမှာလဲ GAP နဲ့ သယ်လာတဲ့ ကားဆိုရင် ထောက်ခံချက်ရှိရင် ဦးစားပေးလွှတ်ပေးဖို့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခြား သင်တန်းတွေလည်း ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ဆွတ်ခူးတဲ့အချိန်မှာ ဥပမာ ရင့်မှည့်တဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အစက်အ ပြောက်တွေ၊ ရောဂါပိုးတွေ မရှိဖို့အတွက်တို့၊ ပြီးတော့ ခူးပြီးမှလုပ်တဲ့အပိုင်း ဒါတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သင်တန်း ပေးမယ်။ အခုလဲ ပေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုပြီးအသေးစိတ် ပါလာမယ်။ စနစ် ပိုကျသွားမှာပေါ့။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်သီးဝလံ အဓိက ပြည်ပဈေးကွက်တွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ တရုတ်ကိုသွားတယ်။ ပြည်ပပို့တဲ့ပမာဏရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းက တရုတ်ကိုသွားတာပဲ။ ယိုးဒယား၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်လို နိုင်ငံတွေကို အထိုက်အလျောက် သွားပါတယ်။ ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်တာကတော့ အထူးသဖြင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကုန်စည်ပြပွဲတွေဖြစ်တဲ့ ဥပမာ ကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲတွေမှာ သွားပြတယ်။ အခုဆိုလဲ လက်ဖက်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အမေရိကန်ကို သွားပြဖို့ လက် ဖက်အသင်းက စီစဉ်နေတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားပြမှာပါ။ အသင်းကို ဖိတ်လာတာပါ။ အဆင့်တန်းမှီပြီး သွားနိုင်တာက လက်ဖက်က ကုန်ခြောက်လိုသဘောမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ သီးနှံကို အမေရိကား သွားပြဖို့ဆိုတာ က အများကြီးလုပ်ဖို့ လိုတယ်။
မေး။ ။ ပြည်ပ ၀ယ်လိုအားရှိပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေန့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိတာမျိုးကော ရှိလား။ ဘယ် သီးနှံတွေများ ဖြစ်မလဲရှင့်။
ဖြေ။ ။ ရှိပါတယ်။ အများကြီးပါပဲ။ စိန်တလုံး ရှိမယ်။ ထောပတ်သီး၊ စတောဘယ်ရီ၊ အပူပိုင်းသီးနှံဆိုရင် နိုင်ငံခြားက လိုချင်တာချည်းပဲ။ ဂျာမနီ၊ အီးယူက လိုချင်တာပဲ။ တစ်လကို အနည်းဆုံး၊ နှစ်ဖွဲ့၊ သုံးဖွဲ့ လာမေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အဆင့်သင့် မဖြစ်တာတွေ များတယ်။ ဒါတွေပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင် သူတို့လို အပ်ချက်နဲ့ ညီတဲ့ဟာကို လုပ်ပေးမှရမှာ။ ဒါပေမဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရှိတယ်။ ဥပမာ စိန်တလုံးသီး ဂျပန်ကအရမ်း လိုချင်တယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ အပူပေးပြီးမှ ပိုးမွှားသတ်ထားတဲ့ စနစ်နဲ့လုပ်မှ သူတို့ဆီပို့နိုင်မယ်။ အဲဒီစနစ် မရှိသေး တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေ့ဂျပန်ကို လုံးဝပို့လို့မရဘူး။ အဲဒီစက်က မြန်မာပြည်မှာ အခုမှစမ်းသပ်တုန်း ရှိသေး တယ်။ အဲတာကလဲ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်ဆီ (JICA) က ပေးထားလို့၊ အ ဓိက ပိုးမွှားတွေကို စမ်းတာ။
မေး။ ။ ပြည်ပဈေးကွက် ၀ယ်လိုအားကို ပြည့်မှီအောင် ပို့နိုင်ဖို့ဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက် ယူရမလဲ။
ဖြေ။ ။ သီးနှံ တစ်ခုပေါ်မှာ အများကြီး မှုတည်တာပေါ့။ ဥပမာ ဖရဲတို့၊ သခွားတို့ဆိုရင် အဆင်သင့်ဖြစ် နေပြီ။ ပြီးတော့ macadamia ၊ ထောပတ်သီး ဆိုရင်တော့ အချိန် သုံးနှစ်လောက်ယူရင် ယူရမယ်။
မေး။ ။ ဈေးကွက်ဝင် သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့ အရည်အသွေးမီတဲ့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေ လို အပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီး တောင်သူတွေ ညည်းငြူနေကြတာတွေ ရှိတယ်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရေး ဘာလုပ် သင့်လဲ။
ဖြေ။ ။ မျိုးစေ့ လိုအပ်ချက်ရှိနေတော့ အသင်းအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းဆောင် ရွက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်။ မျိုးစေ့လိုအပ်ချက်များတဲ့ သီးနှံတွေက ဖရဲ၊ သခွားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အခု လောလောဆယ်တော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့ဆိုရင် တရုတ်နဲ့၊ ယိုးဒယားက တင်သွင်းရတယ်။ အဓိက ဖရဲ့ မျိုးစေ့ လိုအပ်ချက်က အရမ်းများတယ်။ တစ်နှစ်ကို တန်ချိန် ၁၅ တန်လောက် လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အနည်း အကျဉ်းပဲ ထုတ်တယ်။ အများစုက တရုတ်နိုင်ငံက တင်သွင်းနေရတယ်။ ဈေးကလဲ အရမ်းများတယ်။
၀ယ်ချင်တိုင်းလဲ ၀ယ်လို့မရဘူး။ လက်သိပ်ထိုး ၀ယ်နေရတဲ့ အဆင့်မျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဖရဲစိုက်ပျိုးမှု များရင် ဈေး က တက်သွားပြန်ရော၊ ခုလမ်းကြောင်းက တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ သစ်သီးဝလံရောင်းတဲ့ ပွဲရုံတွေကတစ်ဆင့် ယူ နေကြတာ။ အများစုက တရားမ၀င်တင်သွင်းတာ ဒါကိုတရားဝင် ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို အစိုးရကဆက်ပြီး လုပ်ရမှာ။ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်တို့အသင်းက ပူးပေါင်းမှာပါ။ နောက်ပိုင်း GAP သွားဖို့ဆိုရင် တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လေ။ တရားဝင်မဟုတ်ရင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးလို့ မရဘူး။ ပြီးတော့ တရားမ၀င်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ မျိုးစေ့အပေါ်မှာ အာမခံချက် လုံးဝမရှိဘူး။ မျိုး မငြိမ်တာတွေဖြစ်ရင် တောင်သူက ရောင်းရ၀ယ်ရ အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်။ အဲတော့ ဖြေရှင်းချက် တောင်းလို့မရဘူး။ ဒါတွေကို ဌာနဆိုင်ရာတွေက တိတိကျကျ ဆောင်ရွက် ပေးဖို့ရယ်။ နောက်တစ်ခုက တရုတ်ဈေးကွက်ကို သွားတဲ့အတွက် တရုတ်ကြိုက်တဲ့ မျိုးစေ့ကိုပဲ စိုက်ရတာ။ မျိုးစေ့ မရတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ အခက်တွေ့ရော၊ တရုတ်ပေါ်မှာ အားလုံးမူတည်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဈေး ကွက်ကလဲ ကြိုက်ရမယ်။ ပြည်တွင်းမှာလဲ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အာမခံနိုင်တဲ့ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးဖို့သင့်တဲ့အကြောင်း အစိုးရကို အသင်းအဖွဲ့တွေက တင်ပြထားကြပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် AMIA က ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ရှင့်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စိုကျပြိုးရေးနိုငျငံတဈခုဖွဈသညျ။ စိုကျပြိုးရေးပို့ကုနျမြားမှာလညျး မွနျမာနိုငျငံ၏ အဓိက ပို့ကုနျ မြားထဲမှ တဈခုဖွဈသညျ။ အစိုးရကလညျး စိုကျပြိုးရေးပို့ကုနျမြား ပိုမိုတငျပို့နိုငျရေးအတှကျ စိုကျပြိုးရေး ပို့ ကုနျမြားကို အမြိုးသားပို့ကုနျ မဟာဗြူဟာတှငျ ထညျ့သှငျးဆောငျရှကျနသေညျ။ စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျမြား ပိုမို တငျပို့နိုငျရနျဆိုလြှငျ သီးနှံအရညျအသှေး ကောငျးရနျလိုသညျ။ ထိုကဲ့သို့ သီးနှံအရညျအသှေး ကောငျးရနျ ဆိုလြှငျ မြိုးကောငျး၊ မြိုးသနျ့မြား ရှိရနျလိုသညျ။ စိုကျပြိုးရေး အလအေ့ကငျြ့ကောငျးမြား ရှိရနျလိုအပျသညျ။
ထိုကဲ့သို့ စိုကျပြိုးရေး ထှကျကုနျမြား ပိုမိုတငျပို့နိုငျရေး ဆောငျရှကျခွငျးမှာလညျး လူဦးရေ၏ ရ၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောသော တောငျသူမြား ၀ငျငှတေိုးလကျြ အကြိုးရှိစရေနျ ဖွဈသညျ။ တောငျသူမြား ၀ငျငှတေိုး အကြိုးရှိရနျ ဆိုလြှငျ တောငျသူမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့စိုကျပြိုးမညျ့ သီးနှံစြေးကှကျ၏ အလားအလာကို သိရနျလိုသညျ။ ကနျြး မာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော၊ အထှကျနှုနျးတိုးစသေော စိုကျပြိုးရေး နညျးစနဈမြား သိရှိရနျလိုသညျ။
အဆိုပါ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံ သဈသီးဝလံ၊ ပနျးမနျနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စိုကျပြိုးထုတျလုပျ တငျပို့ ရောငျးခြ သူမြားအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုးသနျးမငျးဒငျ အား AMIA ရဲ့ သတငျးထောကျ မစိုးခဈြခဈြပိုငျမှ သှား ရောကျတှဆေုံ့ မေးမွနျးထားသညျမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါသညျ။
မေး။ ။ ဒီနှဈမှာ နှဈရှညျသီးနှံ မဟုတျတဲ့ ဘယျလိုသီးနှံမြိုးတှကေို တောငျသူတှအေနနေဲ့ ရှေးခယျြစိုကျပြိုး သငျ့ပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ ခုလောလောဆယျ တောငျပျေါဒသေ၊ သှားရေးလာရေး ခကျတဲ့ဒသေတှဆေိုရငျ macadamia စိုကျတာ ပိုကောငျးမယျ။ သူက သီးထပျနညျးတယျ။ စြေးကှကျလိုအပျခကျြ ရှိတယျ။ တဈတနျကို သိနျး ရ၀ လောကျ ပေါကျစြေးရှိတယျ။ တောငျပျေါဒသေမှာ စိုကျမယျဆိုရငျ macadamia စိုကျဖို့ သတငျးပေးခငျြ ပါတယျ။ နောကျ ထောပတျသီး စိုကျပါ။ အောကျပွညျမှာကတြော့ ငှကျပြော၊ သူက အလားအလာ အမြားကွီးရှိတယျ။ စိုကျပြိုးသငျ့တယျ။ ဒါအကွမျးဖဉျြး ခွုံပွောတာ။ ဒသေအလိုကျဆိုရငျတော့ တဈခုခငျြး ထပျပွောရမှာပေါ့။ macadamia က တရုတျကို သှားတယျ။ တရုတျပွညျက အိမျနီးခငျြးနိုငျငံ ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ခုဆိုရငျ လကျ မှတျတှေ၊ ဘာတှေ သိပျပွီးတော့ မသတျမှတျသေးဘူး။ နောကျပိုငျး AQSIQ တို့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ လုပျလာ ရငျတော့ သူတို့က သတျမှတျမှာပေါ့။ ငှကျပြောကတော့ ကိုရီးယားနဲ့ တရုတျကို သှားပါတယျ။
မေး။ ။ တောငျသူတှကေို ဒါမြိုးသတငျးအခကျြကို ပေးနိုငျမဲ့နရောတဈခု (ဒါမှမဟုတျ)စနဈတဈခု တညျ ထောငျပေးဖို့ ရှိပါသလား။
ဖွေ။ ။ အသငျးအနနေဲ့ကတော့ တောငျသူကို ပညာပေးအစီအစဉျတှေ အမွဲတမျး လုပျပေးနပေါတယျ။ စိုကျစီးပှားသငျတနျးကြောငျးတှေ ဖှငျ့ပေးမယျ။ ပွီးတော့ အသငျးကနပွေီးတော့ စြေးကှကျတှရေဖို့ ခြိတျဆကျ ပေးမယျ။ ဒါမြိုးတှေ လုပျနတေယျ။ တောငျသူကလညျး အရမျးစိတျဝငျစားတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကြှနျတျောတို့ အသငျးကွီးက အခုဆို အသငျးဝငျ လေးသောငျးခှဲကြျော ရှိလာပွီ ဖွဈပါတယျ။
မေး။ ။ လကျရှိ သဈသီးဝလံ စြေးကှကျအခွအေနနေဲ့ အလားအလာကိုလညျး ဖွကွေားပေးပါဦး ရှငျ့။
ဖွေ။ ။ သဈသီးဝလံ စြေးကှကျကတော့ အားလုံးက စားသုံးမှုပုံစံ ပွောငျးလာတော့၊ အရငျတုနျးက ဆနျ တို့၊ စပါးတို့လောကျပဲ အဓိကထား စားတာ။ ခုကတြော့ သဈသီးဝလံတှကေို စားသုံးမှုမြားလာတယျ။ အထူး သဖွငျ့ တရုတျက ပိုစားသုံးလာတယျ။ ပုံစံပွောငျးလာတဲ့အတှကျ သဈသီးဝလံ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျက စြေးကှကျ အကွီးကွီး ရှိလာတယျ။ တိုးပွီးလာဖို့ပဲ ရှိတယျ။ နောကျတဈခုက အပူပိုငျးသီးနှံက အောကျပိုငျးတှပေဲ အမြားဆုံး စိုကျလို့ရတယျ။ အပူပိုငျး သီးနှံကော၊ သမပိုငျး သီးနှံတှကေော မွနျမာပွညျမှာ စိုကျလို့ရတယျ။ သူတို့တိုငျးပွညျ က အအေးပိုငျးဘကျ ပိုမြားတဲ့အတှကျကွောငျ့ အပူပိုငျးသီးနှံတှကေို သူတို့ဆီမှာ မထှကျဘူး။ မထှကျတော့ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးပွညျ၊ နောကျ ယိုးဒယား၊ ဗီယကျနာမျလို နိုငျငံမြိုးတှကေ သူတို့က ယူရတာပေါ့။ အဲတော့ တ ရုတျပွညျက လူဦးရကေ တဈနတေ့ဈခွား မြားလာတယျ။ နညျးနညျးလဲ ပိုခမျြးသာလာတော့ သူတို့လိုအပျခကျြ က ရှိလာတယျ။ အဲတော့ စြေးကှကျကွီးကတော့ ရှိလာမှာပဲ။ အဲတော့ ကိုယျဘကျက အမယျစုံကို အရညျအ သှေးကောငျးတဲ့ သဈသီးတှထှေကျဖို့ လိုတာပေါ့။
မေး။ ။ စိုကျပြိုးရေး ထှကျကုနျတှေ၊ သီးနှံတှမှော အဓိက အရညျအသှေးပိုငျးက ပွဿာနာ ဖွဈနတေယျ။ အရညျအသှေးပိုငျးအတှကျ အသငျးအနနေဲ့ ဘာတှလေုပျဆောငျပေးနပေါသလဲ။
ဖွေ။ ။ အခု Sustainable Agricuture Development And Food Quailty Initiative(SAFI) ပရော ဂကျြလုပျထားတယျ။ တောငျသူတှအေားလုံး စိုကျပြိုးရေး အလအေ့ကငျြ့ကောငျး(GAP) အလအေ့ကငျြ့ တှရေ အောငျ။ ဖရဲသီးတို့၊ ဘာတို့ကို GAP နညျးနဲ့စိုကျမယျ။ ပွီးရငျ မှုဆယျကုနျစညျဒိုငျမှာ GAP ကောငျတာ တဈခု ထားပေးမယျ။ အဲလောကျထိ အလအေ့ကငျြ့ လုပျလာမယျ။ GAP စိုကျတယျ။ သူ့မှာ အခှငျ့အရေး မရှိဘူး။ ဒီအ တိုငျး တနျးတူရောငျးနရေရငျ တောငျသူက ဘယျစိုကျပြိုးမလဲ။ GAP စိုကျမယျဆိုရငျ သတျမှတျခကျြတှအေ တိုငျး သူကလုပျရတာ။ ရိုးရိုးစိုကျတာထကျ သူက ပိုပွီးအာမခံခကျြ ပိုပေးရတယျ။ ကထိကထလဲ မြားတယျ လေ။ အဲလိုလုပျရတဲ့အတှကျ သူကစြေးကောငျးရဖို့ လိုတယျ။ သူတို့ကိုဒါကွောငျ့ အခှငျ့အရေးပေးဖို့ လိုတာပေါ့။ အဲအတှကျကွောငျ့ ကုနျစညျဒိုငျတှကေို ပွောထားတယျ။ GAP အရောငျးစငျတှေ လုပျပေးဖို့။ လမျးမှာလဲ GAP နဲ့ သယျလာတဲ့ ကားဆိုရငျ ထောကျခံခကျြရှိရငျ ဦးစားပေးလှတျပေးဖို့ ဆှေးနှေးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ တဈခွား သငျတနျးတှလေညျး ပေးဖို့ရှိပါတယျ။ ဆှတျခူးတဲ့အခြိနျမှာ ဥပမာ ရငျ့မှညျ့တဲ့ဟာမြိုး ဖွဈဖို့လိုတယျ။ အစကျအ ပွောကျတှေ၊ ရောဂါပိုးတှေ မရှိဖို့အတှကျတို့၊ ပွီးတော့ ခူးပွီးမှလုပျတဲ့အပိုငျး ဒါတှနေဲ့ပကျသကျပွီး သငျတနျး ပေးမယျ။ အခုလဲ ပေးနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ပိုပွီးအသေးစိတျ ပါလာမယျ။ စနဈ ပိုကသြှားမှာပေါ့။
မေး။ ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သဈသီးဝလံ အဓိက ပွညျပစြေးကှကျတှကေ ဘယျနိုငျငံတှေ ဖွဈမလဲ။
ဖွေ။ ။ အဓိကကတော့ တရုတျကိုသှားတယျ။ ပွညျပပို့တဲ့ပမာဏရဲ့ ၉၉ ရာခိုငျနှုနျးက တရုတျကိုသှားတာပဲ။ ယိုးဒယား၊ စငျကာပူ၊ ဟောငျကောငျလို နိုငျငံတှကေို အထိုကျအလြောကျ သှားပါတယျ။ စြေးကှကျခြဲ့ ထှငျတာကတော့ အထူးသဖွငျ့ စီးပှားကူးသနျးဝနျကွီးဌာနနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ကုနျစညျပွပှဲတှဖွေဈတဲ့ ဥပမာ ကူမငျး ကုနျစညျပွပှဲတှမှော သှားပွတယျ။ အခုဆိုလဲ လကျဖကျနဲ့ ပကျသကျပွီးတော့ အမရေိကနျကို သှားပွဖို့ လကျ ဖကျအသငျးက စီစဉျနတေယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျ သှားပွမှာပါ။ အသငျးကို ဖိတျလာတာပါ။ အဆငျ့တနျးမှီပွီး သှားနိုငျတာက လကျဖကျက ကုနျခွောကျလိုသဘောမြိုး ဖွဈသှားတယျ။ သီးနှံကို အမရေိကား သှားပွဖို့ဆိုတာ က အမြားကွီးလုပျဖို့ လိုတယျ။
မေး။ ။ ပွညျပ ၀ယျလိုအားရှိပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံအနနေ့ တငျပို့နိုငျခွငျး မရှိတာမြိုးကော ရှိလား။ ဘယျ သီးနှံတှမြေား ဖွဈမလဲရှငျ့။
ဖွေ။ ။ ရှိပါတယျ။ အမြားကွီးပါပဲ။ စိနျတလုံး ရှိမယျ။ ထောပတျသီး၊ စတောဘယျရီ၊ အပူပိုငျးသီးနှံဆိုရငျ နိုငျငံခွားက လိုခငျြတာခညျြးပဲ။ ဂြာမနီ၊ အီးယူက လိုခငျြတာပဲ။ တဈလကို အနညျးဆုံး၊ နှဈဖှဲ့၊ သုံးဖှဲ့ လာမေး တယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ဘကျက အဆငျ့သငျ့ မဖွဈတာတှေ မြားတယျ။ ဒါတှပေို့ဖို့အတှကျဆိုရငျ သူတို့လို အပျခကျြနဲ့ ညီတဲ့ဟာကို လုပျပေးမှရမှာ။ ဒါပမေဲ့ သတျမှတျခကျြ ရှိတယျ။ ဥပမာ စိနျတလုံးသီး ဂပြနျကအရမျး လိုခငျြတယျ။ ရနှေေးငှနေဲ့ အပူပေးပွီးမှ ပိုးမှားသတျထားတဲ့ စနဈနဲ့လုပျမှ သူတို့ဆီပို့နိုငျမယျ။ အဲဒီစနဈ မရှိသေး တဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီနဂေ့ပြနျကို လုံးဝပို့လို့မရဘူး။ အဲဒီစကျက မွနျမာပွညျမှာ အခုမှစမျးသပျတုနျး ရှိသေး တယျ။ အဲတာကလဲ ဂပြနျအပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အဂေငျြဆီ (JICA) က ပေးထားလို့၊ အ ဓိက ပိုးမှားတှကေို စမျးတာ။
မေး။ ။ ပွညျပစြေးကှကျ ၀ယျလိုအားကို ပွညျ့မှီအောငျ ပို့နိုငျဖို့ဆိုရငျ အခြိနျဘယျလောကျ ယူရမလဲ။
ဖွေ။ ။ သီးနှံ တဈခုပျေါမှာ အမြားကွီး မှုတညျတာပေါ့။ ဥပမာ ဖရဲတို့၊ သခှားတို့ဆိုရငျ အဆငျသငျ့ဖွဈ နပွေီ။ ပွီးတော့ macadamia ၊ ထောပတျသီး ဆိုရငျတော့ အခြိနျ သုံးနှဈလောကျယူရငျ ယူရမယျ။
မေး။ ။ စြေးကှကျဝငျ သီးနှံတှေ စိုကျပြိုးထုတျလုပျဖို့ အရညျအသှေးမီတဲ့ မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့တှေ လို အပျခကျြရှိနတေယျဆိုပွီး တောငျသူတှေ ညညျးငွူနကွေတာတှေ ရှိတယျ။ မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့ ရရှိရေး ဘာလုပျ သငျ့လဲ။
ဖွေ။ ။ မြိုးစေ့ လိုအပျခကျြရှိနတေော့ အသငျးအနနေဲ့လညျး နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတှနေဲ့ ပေါငျးစညျးဆောငျ ရှကျဖို့ ကွိုးပမျးနတေယျ။ မြိုးစလေို့အပျခကျြမြားတဲ့ သီးနှံတှကေ ဖရဲ၊ သခှားနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ အခု လောလောဆယျတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြိုးစဆေို့ရငျ တရုတျနဲ့၊ ယိုးဒယားက တငျသှငျးရတယျ။ အဓိက ဖရဲ့ မြိုးစေ့ လိုအပျခကျြက အရမျးမြားတယျ။ တဈနှဈကို တနျခြိနျ ၁၅ တနျလောကျ လိုတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ အနညျး အကဉျြးပဲ ထုတျတယျ။ အမြားစုက တရုတျနိုငျငံက တငျသှငျးနရေတယျ။ စြေးကလဲ အရမျးမြားတယျ။
၀ယျခငျြတိုငျးလဲ ၀ယျလို့မရဘူး။ လကျသိပျထိုး ၀ယျနရေတဲ့ အဆငျ့မြိုးတှေ ရှိတယျ။ ဖရဲစိုကျပြိုးမှု မြားရငျ စြေး က တကျသှားပွနျရော၊ ခုလမျးကွောငျးက တရုတျနယျစပျမှာရှိတဲ့ သဈသီးဝလံရောငျးတဲ့ ပှဲရုံတှကေတဈဆငျ့ ယူ နကွေတာ။ အမြားစုက တရားမဝငျတငျသှငျးတာ ဒါကိုတရားဝငျ ဖွဈဖို့အတှကျကို အစိုးရကဆကျပွီး လုပျရမှာ။ လုပျတဲ့အခါမှာလညျး ကြှနျတျောတို့အသငျးက ပူးပေါငျးမှာပါ။ နောကျပိုငျး GAP သှားဖို့ဆိုရငျ တရားဝငျဖွဈဖို့ လိုတယျလေ။ တရားဝငျမဟုတျရငျ လကျမှတျထုတျပေးလို့ မရဘူး။ ပွီးတော့ တရားမဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီ မြိုးစအေ့ပျေါမှာ အာမခံခကျြ လုံးဝမရှိဘူး။ မြိုး မငွိမျတာတှဖွေဈရငျ တောငျသူက ရောငျးရဝယျရ အခကျအခဲ ဖွဈတယျ။ အဲတော့ ဖွရှေငျးခကျြ တောငျးလို့မရဘူး။ ဒါတှကေို ဌာနဆိုငျရာတှကေ တိတိကကြ ဆောငျရှကျ ပေးဖို့ရယျ။ နောကျတဈခုက တရုတျစြေးကှကျကို သှားတဲ့အတှကျ တရုတျကွိုကျတဲ့ မြိုးစကေို့ပဲ စိုကျရတာ။ မြိုးစေ့ မရတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ အခကျတှရေ့ော၊ တရုတျပျေါမှာ အားလုံးမူတညျနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ တရုတျစြေး ကှကျကလဲ ကွိုကျရမယျ။ ပွညျတှငျးမှာလဲ ထုတျလုပျနိုငျတဲ့ အာမခံနိုငျတဲ့ မြိုးစထေု့တျလုပျတဲ့ လုပျငနျးတှေ လုပျပေးဖို့သငျ့တဲ့အကွောငျး အစိုးရကို အသငျးအဖှဲ့တှကေ တငျပွထားကွပါတယျ။
ဟုတျကဲ့ အခုလို အခြိနျပေး ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ AMIA က ကြေးဇူးအထူး တငျပါတယျ ရှငျ့။
I'm writing to let you know of the superb encounter our daughter gained viewing your webblog. She learned lots of pieces, which included what it's like to haveagreat coaching character to get others quite simply fully understand specific impossible issues. You truly exceeded our desires. Many thanks for imparting such helpful, safe, explanatory not to mention easy guidance on this topic to Sandra. off white jordan 1
by wdawizlulcp@gmail.com at June 09 2019
I needed to write you this little bit of remark in order to thank you as before relating to the superb knowledge you've contributed on this site. It is so unbelievably generous of people like you to give openly all thatalot of people could possibly have made available for anebook to help with making some money on their own, precisely considering the fact that you might have done it if you desired. These thoughts additionally acted to become good way to comprehend most people have the same desire the same as my own to find outalot more when it comes to this matter. I'm certain there are lots of more pleasurable periods ahead for many who start reading your site. jordan 11
by kpwslrrx@gmail.com at June 06 2019
Thank youalot for giving everyone an extremely brilliant possiblity to read critical reviews from this site. It's always so lovely and also packed with fun for me and my office fellow workers to visit your web site at the least thrice in one week to study the fresh tips you have. And of course, I am also always contented concerning the stunning tips and hints served by you. Certain4ideas in this posting are in truth the most efficient we have ever had. kd shoes
by ajyywu@gmail.com at June 02 2019
I definitely wanted to developaquick note so as to express gratitude to you for all the splendid ways you are posting on this website. My extensive internet lookup has finally been rewarded with pleasant strategies to share with my colleagues. I 'd admit that most of us website visitors are very lucky to exist inawonderful site with very many awesome people with very helpful tips. I feel rather lucky to have come across your entire website and look forward to really more fabulous moments reading here. Thanksalot once more for everything. polo ralph lauren
by gtnseerwku@gmail.com at May 29 2019
I want to show thanks to the writer just for rescuing me from this particular instance. Right after looking out throughout the the net and meeting proposals that were not pleasant, I was thinking my entire life was well over. Existing devoid of the approaches to the difficulties you've fixed asaresult of your main report isacrucial case, as well as ones which might have inanegative way damaged my entire career if I hadn't noticed your blog post. Your own knowledge and kindness in playing with all the stuff was crucial. I don't know what I would have done if I had not discovered suchasubject like this. I can at this moment look forward to my future. Thank you so much for the specialized and result oriented help. I won't hesitate to propose your blog post to any individual who requires guidelines about this problem. yeezy boost 350 v2
by zjwhqrdggy@gmail.com at May 25 2019
I precisely needed to thank you so much again. I'm not certain the things that I would have carried out in the absence of the creative ideas provided by you concerning that industry. It had been an absolute hard dilemma for me personally, however , viewing your professional avenue you solved the issue made me to weep over gladness. Now i'm grateful for this guidance and in addition have high hopes you recognize what an amazing job you happen to be getting into teaching the mediocre ones usingablog. Most likely you've never encountered any of us. nike react
by eyjrewf@gmail.com at May 21 2019
My wife and i have been so joyous that Edward managed to conclude his researching by way of the ideas he received from your blog. It's not at all simplistic to simply always be makingagift of guides that many many people may have been selling. We really fully grasp we now have the blog owner to thank for this. The most important illustrations you've made, the straightforward web site navigation, the friendships you can help to promote - it's got everything unbelievable, and it's really letting our son in addition to the family consider that the situation is brilliant, which is quite pressing. Many thanks for the whole thing! yeezy boost 350
by ktxhegoxr@gmail.com at May 20 2019
I want to express some thanks to the writer for bailing me out of this trouble. Just after exploring throughout the the web and obtaining methods that were not powerful, I assumed my entire life was done. Existing without the strategies to the problems you've sorted out by means of your entire short post isacritical case, and the ones that could have negatively damaged my career if I hadn't come across your site. The understanding and kindness in dealing with all the pieces was very helpful. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered suchasubject like this. I can also now relish my future. Thanks for your time very much for your expert and results-oriented guide. I won't be reluctant to recommend your web sites to anybody who desires guide on this situation. chrome hearts [url=http://www.chromeheartsoutletonline.com]chrome hearts[/url]
by vvslrs@gmail.com at May 17 2019
A lot of thanks for all your valuable efforts on this site. My mom really likes getting into investigation and it's easy to see why. We all notice all concerning the lively ways you produce useful tips and hints on this web blog and increase participation from some others on that subject matter and my princess is truly discoveringawhole lot. Have fun with the rest of the year. You're carrying outafirst class job.
by http://www.bape-hoodie.us.com at May 12 2019
I happen to be writing to make you know of the exceptional experience my princess went through reading through your blog. She mastered several pieces, including what it is like to possess an amazing giving heart to get many people just have an understanding of several tortuous issues. You actually surpassed readers' desires. Many thanks for giving the necessary, healthy, edifying not to mention fun tips about your topic to Gloria.
by http://www.hardenshoes.us.com at May 08 2019